အဖျော်ယမကာ အမှတ်တံဆိပ် တက်ကြွ သစ်တော စားသုံးမှု အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည် – Pandaily
Jan 19, 2022, 19:56ညနေ 2022/01/19 23:10:32 Pandaily
ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ မှာတော့ တရုတ် အဖျော်ယမကာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Enhancy Forest က သူတို့ရဲ့ပူဖောင်း ရေ စားသုံးမှု ထိုးထွင်း သိမြင် မှု အစီရင်ခံစာ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၏ပထမ ၁၁ လ အတွက် ၎င်း၏ Tmall စတိုး ၏ ရောင်းအား အချက်အလက် များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ခြင်းအားဖြင့် ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပူဖောင်း ရေ ၀ ယ် သူ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျိုးသမီး များဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ပစ်မှတ် ထားသော ပရိသတ် သည် အမျိုးသမီး များပိုမို ဖြစ်သည်ဟု အစီရင်ခံစာ ကဖော်ပြသည်။
အသက်အရွယ် ၏ ရှုထောင့်မှကြည့် လျှင်၊ ၉၀ လွန် ကာလသည် ကုမ္ပဏီ၏ ဖောက်သည် များ၏ ထက်ဝက် နီးပါး ရှိသည်။ ဤ ဖောက်သည် များအနက် ၃၄ နှစ်အောက် အုပ်စုသည် ၀ ယ်ယူ မှု အများစု ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ ၏စုစုပေါင်း စားသုံးသူ အခြေစိုက်စခန်း ၏ ၇၂. ၉၉% ရှိသည်။ ရွေးချယ် နိုင်သော အရသာ အရ မက်မွန် ဖြူ သည် စားသုံးသူ ရွေးချယ်မှု တွင်ပထမ နေရာတွင်ရှိသည်။
စားသုံး သူများသည် တက်ကြွသော သစ်တော မှ ပူဖောင်း ရေကို အဘယ်ကြောင့် ရွေးချယ် ကြ သနည်း။ အစီရင်ခံစာအရ အဓိကအချက် များမှာ အချိုရည် များတွင် သကြား ၊ အဆီ နှင့် ကယ်လို ရီ များမပါ ၀ င်ပါ။ စျေးကွက် သုတေသန တွင် စားသုံး သူများ စွ ာက ၎င်းတို့သည် ရိုးရှင်းသော ပါဝင် ပစ္စည်း များကြောင့် သကြား ပူဖောင်း ရေ ၀ ယ်ရန် ရွေးချယ် ကြ သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ် သိပ္ပံ အကယ်ဒမီ မှ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အစီရင်ခံစာတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကိုပိုမို သိ ရှိလာ ခြင်းနှင့်အတူ သကြား မ ပါသော အဖျော်ယမကာ စျေးကွက် ၏အရွယ်အစား မှာ ဆက်လက် ကြီးထွား လာပြီး ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် ယွမ် ၂၂. ၇၄ ဘီလီယံ အထိတိုးလာ လိမ့်မည်ဟု မကြာသေးမီက ဖော်ပြခဲ့သည်။